Madaxweynaha Iran oo sheegay in Masiibada Somaliya ay sharaf-dhac ku tahay Caalamka. – Radio Daljir
Agoosto 14, 2011 12:00 b 0
Tehraan, Aug, 14 – Madaxweynaha Jamhuuriyada Islaamiga ah ee Iran Maxamuud Axmedi Najaad ayaa maanta oo Axad ah ka sheegay magaalada Tehran ee caasimada dalka Iran in masiibada bani?aadantinimo ee somalia ay sharaf-dhac ku tahay caalamka iyo waxa loogu yeero maamulayaasha caalamka.
Isagoo ka hadlayey xaflad xadhiga lagaga jarayey Wasaarada iskaashiga, shaqaalaha iyo amniga bulshada ayaa madaxweyne Axmedi Najaad halkaasi ka sheegay in dadka ugu badan caalamka ay ku noolyihiin faqri aad u liita , iyadoo dalal xoogan oo baadaya wadamada soo koroya ay u dhaqmaan si islaweyni iyo qabi ku jirto.
Madaxweyne Axmedi Najaad ayaa sidoo kale ifiyey muhiimada ay cadaaladu u leedahay bulshada si loo asaasao maamul dhanka bulshada ah.
” ruuxiyada deeqsnimda ayaa horay u timi caalamka , waqti waqtiyada kamid ah cadaaladda ayaa hanaqaaday , dhamaan risaalooyinkii anbiyada ayaa waxaa gundhig u ahaa in ay sameeyaan cadaalad maadaama ay dadka ugu yeerayeen hal iimaan” ayuu hadalkiisa ku sheegay madaxweyne Najaad, waxana uu intaa ku daray ” cadaaladdu waxay sal u tahay abuuritaanka mujtamac iyo samaynta maamul bulsho”
Madaxweyne Maxamuud Axmedi Najaad ayaa dhamaadkii asbuucii hore sheegay in dalkiisu uu Somalia ugu deeqayo $ 25 million oo dollar si wax looga qabto macaluusha haysata walaalaha Somalia.
Madaxweyne Maxamuud Axmedi Najaad ayaa asbuucii hore afka ku weeraray wadamada reer galbeedka , waxana uu sheegay in diyaaradaha duqaymaha ka wada dalka Libya
Ee reer galbeedka looga baahnaa in ay gargaar gaadhsiiyaan dadka ku macaluulsan Somalia halkii ay banbaanooyin la dhicilahaayeen shacabka Libya.
Dalka Iran ayaa guud ahaan waxaa ka socda dadaal lagu gargaarayo daka ku macaluulsan Somalia, iyadoo bisha Cas ee dalka Iran ay gargaar gaadhsiineysay xiliyadii ugu dameeyey dadka ku macaluulsan koonfurta Somalia iyo xeryaha qaxootiga ku noolyihiin ee dalka Kenya.
Hantiilayaasha reer Iran iyo shacabka caadiga ah ee wadankaasi Iran ayaa dhankooda wada dadaal xoogan oo ay qaadhaan ugu ururinayaan Somalia.
hadalka Madaxweye Maxamuud Axmedi Najaad ayaa imanaya iyadoo la sheegay 22 carruur somaliyeed ay macaluul ugu dhinteen sabtidii magaalada Muqdisho, waxana lasoo weriyey in caruurtaasi ay ku dhinteen degaanada Dharkeynley iyo xoosh ee caasimada muqdisho.
Qaramada midoobey ayaa digniin kusoo saartay in kabadan 10,000 caruur ah ay maalintiiba ka dhimankarayaan 13 caruur ah dhulka lagaga dhawaaqay macaluusha ee Somalia, waana caruurta da,doodu ka hooseyso 5 jir.
” tan macanaheedu waxa weeyaan in 10% carruurta da,doodu ka hooseyso 5 jirka ay dhimanayaan 11 asbuucba, xaqiiqduu markaa masawirka nocaas ah waa mid qalbi-jab ah” sidaas ayuu ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha guud ee qaramada midoobey ugu qaabilsan somalia Augustine Philip Mahiga u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobey arbacadii lasoo dhaafay.
Abaarta iyo macaluusha ka taagan geeska africa ayaa saamaysay 11.8 million oo ruux oo ku kala nool dalalka Somalia, Kenya, iyo Ethiopia, iyadoo dalka somalia uu yahay dalka ay masiibadani sida xun ugu dhufatay
abaarta ka taagan geeska afrika ayaa lagu tilmaamay tii ugu xumayd mudo 60 sano ah, waxana qiyaas ay qaramada midoobey bixisay ay tilmaamaysaa in rubuc kamid ah dadka somaliyeed oo dhan 9.9 ay wadanka gudihiisa ku barakeceen ama ay ku noolyihiin dibada dalkodii xabiibka ahaa ee soamalia.
Qaramada midoobey ayaa 5 qaybood oo kamid ah somalia kagaga dhawaaqday heerka ” macaluul” ,waxana ay UN-ku sheegayaan in jawaabta bani,aadantinimada ee caalamku bixiyey ay tahay mid aan kaafi ahayn ama aan ku filnayn.
Somalia ayaan lahayn dowlad dhexe oo shaqayneysa tan iyo sanadkii 1991dii markii jabhadihii maqaarsaarka ahaa ee ay dabada ka riixeysay Ethiopia ay meesha ka saareen dowlada sareeye Gaas Maxamed Siyaad Barre.
M/weyne Shariif iyo wafti uu horkacyo oo u ambabaxay dalka Brundi.